ရူးလောက်အောင်ချမ်းသာတဲ့ အာရှသားများက ဒေသတွင်း မညီမ...
5 ก.ย. 2561 - 19:30 น.
အာရှ ပစိဖိတ် တကြောမှာ မဟာ ဇောတိက ခေါ်ရမယ့် လူတန်းစားသစ် အရေအတွက်က မြောက်အမေရိကနဲ့ ဥရောပကို သာသွားပြီလို့ အောက်စ်ဖမ်း သုတေသနအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေမှာ ကြွယ်ဝမှု မညီမျှတာက ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်လို့လည်း အောက်စ်ဖမ်း အဖွဲ့ရဲ့ အာရှ ဒေသတွင်း မညီမျှမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မွတ်စတာဖာ တာလ်ပူးက ပြောပါတယ်။
ဘီလျံနာ သူဌေး ၅၈၅ ယောက် နဲ့ အမေရိကန်က သူဌေးပေါတဲ့ စာရင်းမှာ ထိပ်က ရှိနေတယ်လို့ ဖို့ဘ်စ် စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယလို ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာတဲ့ စျေးကွက်တွေမှာ ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး နဲ့ ရှယ်ယာစျေးကွက်တွေ တက်လာချိန်မှာ ဖွံ့ဖြိုးခိုင်မာပြီး ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွေက ပုံမှန်တိုးတက်မှုကလည်း ဒီလို ဒေသတခုလုံး တိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေတယ်လို့ နယူးယော့ အခြေစိုက် Capgemini စျေးကွက် သုတေသနအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
၂ဝ၁၈ ဖို့ဘ်စ် မဂ္ဂဇင်းအလိုအရ ပိုနီမားလို့ သိကြတဲ့ မားဟွာတန်က အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ နံပါတ် ၁၇ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖို့ဘ်စ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ထိပ်တန်း ဘီလျံနာ ၂ဝ ထဲမှာ အလီဘာဘာ အင်တာနက် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဂျက်မား ပါပါတယ်။ အလီဘာဘာ ရဲ့ ရှယ်ယာစျေးတွေက မနှစ်က နှစ်ဆ တက်လာပြီး ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ကုမ္ပဏီတွေထဲ ပါပါတယ်။ ဂျက်မားပိုင် ချမ်းသာမှုကိုက ဒေါ်လာ ၃၉ သန်း ရှိပါတယ်။
အလွန် မညီမျှမှု ကြီးတဲ့ ထိုင်းမှာလည်း ကြွယ်ဝမှု အသစ် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိပ်ဆုံးက လူ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကပဲ ယူသွားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရူးလောက်အောင်ချမ်းသာတဲ့ အာရှသားများက ဒေသတွင်း မညီမျှမှုကို မီးမောင်းထိုးပြ